अपांगता भएका व्यक्तिले गरे यस्तो गुनासो ! | suryakhabar.com
Home देश अपांगता भएका व्यक्तिले गरे यस्तो गुनासो !
on: १२ जेष्ठ २०७५, शनिबार १३:१४ In: देशTags: No Comments
काठमाडौं । बाजुराको उत्तरी भेगमा पर्ने हिमाली गाउँपालिकाका अधिकांश अपांगता भएका व्यक्तिले सदरमुकाम पुगेर अपांगता परिचय पत्र नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
भौगोलिक विकटमा रहेको हिमाली गाउँपालिकाका अपांगता भएका व्यक्तिले परिचय पत्र गाउँबाट जिल्ला सदरमुकाम पुग्न टाढा भएकै कारण समयमै अपांगता परिचय पत्र नपाएको हिमाली गाउँपालिका– १ देउसैनका वीरबहादुर थापाले बताए।
२५ वर्षका वीरबहादुरले आफन्तको सहयोगमा परिचयपत्र बनाएको भए पनि उहाँकी २० वर्षीया श्रीमती अञ्जना थापा र सात वर्षीया भाइ विशाल थापाको परिचय पत्र बनाउन नसकेको थापाले बताए ।
हुम्ला जिल्लाको सिमानामा रहेको हिमाली गाउँपालिका– ३ मा पर्ने गुम्बा गाउँका स्थानीयवासीले सदरकमुकाम मार्तडी पुग्न चार दिन भन्दा बढी लाग्ने भएकाले अहिलेसम्म नागरिकता लिएका छैनन् ।
गाउँमा २८ जनाको मात्र नागरिकता बनेको छ । अझै करीब ५० जना भन्दा बढी गुम्बाका स्थानीयवासीले नागरिकता पाउनबाट वञ्चित भएका छन् । नागरिकता नबनाएकै कारण हालै सम्पन्न तीन तहको निर्वाचननमा मतदानबाट वञ्चित भएको गुमबाका कृष्ण लामाले बताउुभयो । उनले गाउँमा अपांगता भएका व्यक्तिले टाढा भएकै कारण परिचयपत्र नपाएको गुनासो गरे ।
हिमाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्दबहादुर मल्लले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुरासँग समन्वय गरी शिविर सञ्चालन गर्न आग्रह गर्दै आएको बताएका छन् । गाउँपालिका अध्यक्ष मल्लले आफूले दुर्गमका जनताको हकहितका लागि पहल गर्दै आएको बताए ।
यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी चेतराज बरालले उत्तरी भेगका स्थानीयवासी नागरिकता, अपांगता परिचय पत्र लगायतका सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुँदै आएकाले आउँदो शुक्रबार शिविर सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको बताए ।
बौलाहा कुकुरले ९ जनालाई घाईते बनायो
१२ जेष्ठ २०७५, शनिबार १३:१४